M Gotland oo taageersan dalabyada is casilaad ee Kinberg Batra - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xildhibaan Jesper Skalberg Karlsson (M) iyo partiledare Anna Kinberg Batra (M). sawir: Foto: Jonas Neuman/Sveriges Radio
Laamaha Xisbiga ee ku dhagan Kindberg Batra
La daabacay torsdag 24 augusti 2017 kl 09.46
Jesper Skalberg guddoomiyaha Laanta xisbiga ee Gotland ayaa aaaminsan in xaaladda xisbiga ku sugan yahay aysan wanaagsanayn, ayna wax la fahmi karo tahay in su’aal laga keeno hoggaanka xisbiga.
– Xaaladda xisbiga ma fiicna. Xataa waxa aan dhahi karaan in aan ku sugan nahay xaalad cakiran. Marka wax la garan karo in su’aal laga keeno hoggaanka iyo kartida hoggaanka xaaladaan nooga saari karo, ayuu yeri Jesper Skalberg oo madax u ah laanta xisbiga M ku leeyahay Gotland ahna xildhibaan barlamaanka ka tirsan, waxa uuna sii raaciyey hadalkiisa:
– Kadib markii aan la hadlay golaha fulinta e laanta xisbiga waxa ii cadaatay in aysan jrin wax kalsooni ah oo lagu qabo hoggaanka xisbiga.
Galabnimadii shalay ayey laamaha xisbiga ku leeyahay Uppsala iyo Västerbotten ayaguna ka dalbadeen Anna Kindberg Batra in ay is casihso
– Galabnimadii iyo habeynimadii shalay waxa yeelanay kulamo aan ku sahminayno aragtida xubnaha xisbiga iyo wakiilada la doortay. Xaalad xisbiga waxay noola muuqataa mid meel xun maraysa marka ay timaado dhanka taageerada. Sidaas waxa yeri Fredrik Ahlstedt oo ah guddoomiye ku xigeenka laanta ee Uppsala.
Dhanka kale Anders Ågren oo ah guddoomiyaha xisbiga ee gobolka Västerbotten ayaa asna u sheegay barnaamijka Studie Ett ee ka baxa raadiyaha in ay tahay lagama maarmaan is casilaadda hoggaamiyaha.
– Xisbiga waxa uu baahan yahay bilow cad oo oo cusub. Waxa ila tahay taas xisbiga in ay u ahaan laheyd tillaabo dahab ah oo la qaaday madaama maanta taageerada xisbiga sii dhimanayso. Dabcan ma lahan qalad oo dhan hoggaamiyaha xisbiga kaliya balse sida oo kale xisbiga oo dhan. Way noo muuqataa sida aan arrintan wax uga qaban karno laakiin waxa ay u baahan tahay bilow cusub, ayuu yeri.
Horey sidaan oo kale waxa dalabyo ah in ay is casisho oo banayso hoggaanka Anna Kindberg Batra ay uga soo yeeraan laamo ay ka mid yahiin Stockholm, Dalarna iyo qaybo ka mid ah gobolka Skåne. Laakiin Hoggaamiye Anna Kindberg Batra ayaa weli ku adkaysanaysa hoggaanka xisbiga in ay sii haynayso illaayo intii laga gaarayo dhamaadka xilligii loo doortay in ay hoggaanka hayso.
Anna Kindberg Batra: isma casilayo